Iphrofayela Yenkampani - China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co., Ltd.
China Zhenyuan Steel Sakhiwo Ubunjiniyela Co., Ltd.
China Zhenyuan Steel Sakhiwo Ubunjiniyela Co., Ltd. ngusonkontileka wohlaka lwensimbi ohlanganisa ukwakhiwa, ukwenziwa nokufakwa.
Le nkampani yasungulwa ngoJulayi 2006, eyayaziwa ngeKunming Hongli Architectural Design Studio. Ngokwanda kwebhizinisi le-studio, ithuthukise kancane kancane ibhizinisi layo ekwakhiweni kwesiza. Kusukela ngo-2015, ithuthukise kancane kancane ibhizinisi layo laba ukwakhiwa kwezobunjiniyela futhi yaguqulwa yaba yinkampani yobunjiniyela bensimbi. Izinkambu zokwakhiwa, ukucubungulwa kanye nokufakwa kweNkampani zifaka phakathi: amahhotela, izakhiwo zamahhovisi, ukugcina okubandayo, izitshalo zezimboni, izindlu zezindlu, izinkundla zezemidlalo nezinye izakhiwo. Umnyango wezobuchwepheshe ubekwe ohlwini njengomnyango oyinhloko wenkampani selokhu yasungulwa. Okungenani abantu abangu-3 (kufaka phakathi umuntu osemthethweni) kulo mnyango baneminyaka engama-3-5 yokuhlangenwe nakho kokuklama esikhungweni sokuklama futhi bonke banemvelaphi yesikhungo sokuklama. Sekuyiminyaka engaphezu kweyishumi inkampani yakha ipulani elingaba ngu-800,000m2, futhi iminyaka emihlanu, indawo yokwakha ibe cishe ngama-280,000m2.
Inkampani ihlale ibeka ukukhiqizwa okuphephile, ikhwalithi yobunjiniyela nokuqedwa ngokwesikhathi sokwakha kwasekuqaleni. Ikhasimende lokuqala yisimiso esiyisisekelo senkampani. Ukwakha ubunjiniyela bekhwalithi yikhompiyutha yokwakha imakethe. Ukulandela lo mqondo, inkampani ithole ukusekelwa okuqinile nokuqashelwa kubantu abanokuqonda kuzo zonke izindlela zokuphila.
Selokhu kwasungulwa inkampani, amaphrojekthi wokwakha ubunjiniyela benkampani kanye nokwesekwa kwezobuchwepheshe kusabalale sonke isifundazwe kanye namazwe aseningizimu-mpumalanga ye-Asia. Uma sibheka ukuthuthukiswa kwenkampani isikhathi eside, ukwesekwa kwezobuchwepheshe nokwakhiwa kwamaphrojekthi, sizokwenza uhlelo lwesifunda olubanzi futhi sifune ukubambisana okwengeziwe nawo wonke amazwe ahambisana "neBelt and Road" njengomgogodla.
Idumela elihle lenkampani, ubunjiniyela obusezingeni eliphakeme kanye nensizakalo esezingeni eliphakeme zithole udumo olukhulu kuzo zonke izizinda zempilo futhi zakha isithombe esihle kakhulu senkampani.
Isisekelo sokukhiqiza senkampani:
Steel isakhiwo ipuleti futhi kwesigaba steel ukucutshungulwa elisekela: Tianjin futhi Yunnan, China
Ngokwanda kwebhizinisi, i-China Zhenyuan Steel Structure Engineering Co, Ltd iye yangena kancane kancane ekwakhiweni kwensimu. Eminyakeni emithathu eyedlule, iphrojekthi yokwakha esizeni ibingamamitha ayisikwele angama-90000, kanti ukwakhiwa komdwebo wangaphandle nokwesekwa kokuklama kungamamitha-skwele angama-260000.